Waxaan u muuqanaa inaan ka hadalno iibka dakhliga la soo saaray, laakiin kama hadlayno khasaaraha marka aysan si fiican u socon. Iibintu waa isboorti dhiig ee shirkadaha badankood waxayna umuuqataa in dulqaad yar uu leeyahay maalmahan xirfadlayaasha iibka inay kor uqaadaan, dhisaan xiriiro, ayna badalaan macaamiisha. The Maareeyaha iibka xitaa wuxuu leeyahay booska aan laga xujeyn karin ee ah inuu dhiiro galiyo oo u kaxeeyo shaqaalaha inay la kulmaan oo ay dhaafaan yoolalka. Soo gal maareeyaha khaldan oo shaqaalaha iibka oo dhami way khaldami karaan. Waxaan goobjoog ugu ahaa gacanteyda koowaad, anigoo u kuur galaya sida maamulka maareynta iibku diirada u saaran yahay soo jeedimaha, soo gelinta xogta ama u dhiirrigelinta qof ka cabsi badan iibka meel ka baxsan bailiwick-kooda.
Tikniyoolajiyadda karti-siinta iibintu waa aalad lagu caawinayo shaqaalahaaga iibka ah isla markaana awood u siinaya awooddooda inay si hufan oo wax ku ool ah ugu socdaan. Maaha inay kor u qaaddo caqabadaha, waa inay ka saartaa. Waa mid ka mid ah sababaha aan u jecel nahay kuwayaga Iibka madal (kafaala) aad u badan. Dashboard-kooda loogu talagalay Salesforce ee shaqaalaha iibka iyo maamulkaba waxay si weyn u yareyneysaa waqtiga ay duubto, la socoto oo ka warbixiso dhaqdhaqaaqa iibka.
Guntii iyo gunaanadkii ayaa ah in hal maamule oo fashilmay uu waayi karo shirkad kor u dhaafaysa $ 4 milyan oo wax soo saar luntay, maamul xumo kooxeed, khibrad macmiil la'aan, qorista, mushaharka iyo tababarka. Halkan waxaa ah burburka sida Maamulayaasha Iibinta u fashilmaan.